भारतिय दादागिरी र हस्तक्षेप मुर्दाबात : आज घटेको घटना , सबै मिलेर सरकार समक्ष पुराउ - info4nepal
भारतिय दादागिरी र हस्तक्षेप मुर्दाबात : आज घटेको घटना , सबै मिलेर सरकार समक्ष पुराउ
ranjan 10 months ago No Comments
april 27, काठमाडौं
पोस्ट पढ्नु भन्दा अगाडी सबैले यो पोस्टलाई शेयर गरेर यो कुरा सरकार समक्ष पुराउन सहयोग गर्नुहोला । एक जिम्मेवारी नागरिकको हैसियतले पनि येति त सवैले गर्नुपर्छ ।
आज कन्चन्पुरको पुनर्बास नगरपालिकामा नेपाल प्रहरी र स्थनियले बन्यजन्तुको संरक्षणको लागि तार बान्दै गर्दा भारतिय प्रहरी ssb ले दादागिरी देखायेका छन । हाम्रो सरकार अनि कानुन तेति सम्म पनि लाचार छैन कि अरुले जे गरे पनि हामी हेरेर मात्र बस्नु परोस । सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताले यो पोस्टलाई शेयर गरेर नेपाल सरकार समक्ष पुराउ ।
के हामी यिनिहरुको दादागिरी सहेर बस्ने हो? सधै भारतिय हस्तक्षेपमा बस्ने हो? येत्रो सिमाना मिचेका छन । देशलाइ चार चार महिना नाकावन्दी लगायेका छन अनि नेपालको उन्नती प्रगती कहिले पनि नहोस भन्ने सोच्ने येस्ता भारतियहरुको दादागिरी आखिर कहिले सम्म ??
आजसम्म ईतिहास साक्षी छ कि नेपालिहरु कसै सङ झुकेको छैनौ र झुक्दा पनि झुक्दैनौ । हामी आजसम्म कसैको गुलामी गरेको छैनौ । यो ईतिहास हाम्रो हो । तर बेला बेलामा देशमा भारतिय हस्तक्षेपले सारा नेपालिलाइ यो सोच्न बाध्य बनाउछ कि हामी कस्तो चुतिया छिमेकी रास्ट्रसङ जोडियेका छौ भनेर ।
कहिले नाकाबन्दी , कहिले कोशी पुल, नेपालको खोलानाला सबैमा चोर आखाले हेर्ने भारत नेपालको कहिले पनि हित र बिकास चाहदैन । नेपाललाइ उस्ले सधै कमजोर मुलुक भैराखेको हेर्न चाहान्छ । तर हामी नेपाली येसरी चुप बस्न हुदैन । येस्तो भारतिय हस्तक्षेपको खुलेर बिरोध गर्न पर्छ। यो हाम्रो देश हो हाम्रो भुमी हो अनि हाम्रो माटो हो । येस्को निम्ति जे गर्न पर्छ त्यो हामि गर्छौ ।कसैको दादागिरी हैन। हामी स्वाभिमानी नेपाली हौ।
सबैले यो पोस्टलाइ शेयर गरेर नेपाल सरकार समक्ष पुराउ । नेपाल सरकारलाइ झकझकाउ ।
भारतिय हस्तक्षेप : मुर्दाबात
कुनै बेला येस्तो थियो नाकाबन्दिको बेला:
“आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि भारत खुसी भएको छ ।
नेपालमा संविधान जारी भइसकेपछि पनि संशोधन गर्न सातबुँदे प्रस्ताव पठाएको भारतले आफूले भनेजस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि भारत खुसी भएको हो ।
नेपालका भएको निर्णयपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले मधेसीले अब अधिकार पाउने लेखेका छन् । भारतको चर्चित च्यानल आजतकले लेखेको छ- ‘मधेसी समुदायको आन्दोलनका बीच नेपालमा संविधान संशोधनको निर्णय भएको छ । भारत पनि सबैको अधिकार समटिने गरी यही चाहन्थ्यो ।’”
समाचारमा मधेस आन्दोलनका कारण भारत-नेपाल सम्बन्ध विग्रिएको दाबी गरिएको छ । ‘काठमाडौंले भारतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा एक अघोषित नाकाबन्दीको आरोप लगाएको छ । जबकी मधेस आन्दोलनले नाकाबन्दी भएको हो ।’ समाचारमा भनिएको छ ।
सोमबार विहान बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका सत्तारुढ दलहरुले मधेसी मोर्चाकै मागअनुसार संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।”
फ्रान्सले अर्जेन्टिनालाई घर फर्कायो , अर्जेन्टिनाको विस्वकप यात्रा समाप्त
ranjan June 30, 2018
होसियार :पुरानो मार्स्कको येस्तो बेपार , छाला कुहिने रोगको बिगबिगती
ranjan June 24, 2018
भ्रस्टचारी हरुले १२ अर्बमा किनेको वाइडबडीको ब्रेक सिस्टम ३ महिनामै बिग्रियो, ब्रेक सिस्टम’ नफेरि उड्न नसक्ने !
ranjan November 22, 2018
मुलुकी ऐन अन्तर्गत केपी ओलीलाई ५ वर्ष जेल सजाए हुनसक्ने ! मुद्दा चलाउने वकिल देखेर डरायो प्रहरी
ranjan December 4, 2018
कर्मचारीको तलब बढेन, भत्ता २ हजारले बढ्यो, २ लाखसम्मको बीमा गर्दा ५० प्रतिशत सरकारले तिरिदिने
ranjan May 29, 2018
३३ केजी सुन तस्करीको ठुलो माछा प्रधानमन्त्रीनै भएको खुलाशा ! अब जेल जान्छन त प्रधानमन्त्री ?
ranjan June 25, 2018
केपी ओलीले उपचारको लागि मात्र १८ करोड सरकारको पैसा उडाए, लुट्न सके लुट गीत सुनेपछि कस्तो भो होला त्यो मन ?